I-Covid-19 imandla kwababhemayo | Scrolla Izindaba
I-Covid-19 imandla kwababhemayo
Odokotela babika ukuthi ababhemayo kungenzeka babe nezimpawu ezibucayi ze-Covid-19.
Ucwaningo olusha lwase-Melika lubonisa ukuthi ababhemayo nabo basithola kalula lesi sifo.
Abacwaningi bathola ukuthi ukubhema kwenza amaphaphu akhiqize amaprotheni athile enza kube lula ukuthi leli gciwane linamathele kuwo futhi litheleleke.
Izindaba ezimnandi ukuthi amanani aphezulu ale protheni kumaphaphu abantu ababhemayo abukeka njengawesikhashana. Ukuyeka ukubhema kunganciphisa amathuba futhi kwehlise nobungozi bokuthola i-Covid-19.